Snapdragon 775G Chipset ဒါမှမဟုတ် ကမ္ဘာပထမဆုံး 6nm Chipset ?? — Anycall Mobile
By liam September 25, 2020 1 Min Read
Qualcomm အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ Flagship Chipset အသစ်ဖြစ်တဲ့ Snapdragon 875 ကိုချပြဖို့ စီစဉ်နေကြောင်း စာဖတ်သူအားလုံးသိပြီးဖြစ်မှာပါ။ ဒီ Snapdragon 875 Chipset ဟာဆိုရင် 5nm Process အပေါ်အခြေခံပြီးထွက်ရှိလာမှာပဲဖြစ်ပြီး ဒီနှစ်ကုန်လောက်မှာထွက်ရှိလာနိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်။ မကြာခင်မှာလည်း ဒီ 875 Chip နဲ့ဖုန်းကိုဈေးကွက်ထဲမှာ တွေ့လာရဖို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ အခု SD 875 ဟာ SD855 ၊ SD865 chipsets တို့လို့ Snapdragon 875 Plus ဆိုပြီး Plus Version လည်းထွက်လာဖို့ရှိနေပါတယ်။
အခုအသစ်ထပ်ထွက်လာတဲ့သတင်းတွေအရ Qualcomm အနေနဲ့ 5nm SD875 SoC အပြင် Qualcomm Snapdragon 775G 6nm Processor ကိုပါမိတ်ဆက်လာဖို့ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ 775G ဆိုတဲ့နာမည်အရ ဒီ Chip ဟာ SD765G နေရာမှာအစားထိုးဝင်ရောက်လာနိုင်ပါတယ်။
6nm Process ပေါ်အခြေခံပြီးထုတ်လုပ်ထားတာကြောင့် Snapdragon 765G ထက် CPU မှာ 50% နဲ့Graphics အပိုင်းမှာ 50 % အထိပိုကောင်းလာမယ်လို့သိရပါတယ်။ နောက်ပြီး 120Hz display, 12GB LPDDR5 RAM နဲ့ 256GB UFS 3.1 storage ကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးလာနိုင်ပါတယ်။
Flagship Chipset ဖြစ်တဲ့ Snapdragon 8755nm chipset ကတော့ လက်ရှိ 7nm SoCs တွေထက် 25% ပိုသေးသွားမှာဖြစ်ပြီးBattery Consumption ပိုင်းမှာ 20% အထိသက်သာလာမယ်လို့သိရပါတယ်။ နောက်ထပ် Snapdragon 875 မှာ Arm Cortex-1 ၊ Cortex-A78 CPU cores နဲ့ Snapdragon X60 5G modem ပါဝင်လာဖို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ တစ်ခြားအချက်တွေကိုတော့သေချာမသိထားရသေးပါဘူး။ နောက်ရက်တွေမှာတော့ Snapdragon 875 ရဲ့သတင်းတွေထပ်ထွက်လာနိုင်ပါတယ်။
ဒီ Snapdragon 875 ကိုတော့ Xiaomi ဒါမှမဟုတ် Vivo ကနေပထမဆုံးသုံးလာနိုင်ပါတယ်။
K40 မှာများပထမဆုံးသုံးလာလေမလား..? စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ..